Otu Anyị Si Eji Ngwaọrụ Ọha na Eze ebe ọrụ | Martech Zone
Na nyocha sitere na Microsoft na Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ na Nghọta na priselọ ỌrụỌ na-egosi na ha ekpughebebeghị ihe akaebe na umunwanyi mara ihe karie umu nwoke.
Menmụ nwoke nwere ike ịsị karịa ụmụ nwanyị na-ekwu ihe mgbochi ndị a bụ maka nchedo nchekwa, ebe ụmụ nwanyị yikarịrị ịta ụta maka nrụpụta arụpụtaghị ihe.
Ug. Ọ bụ ihe nwute na, mgbe oge a nile, anyị ka nwere ụfọdụ ndị nọ n'ọrụ na-emebi ikike maka ndị ọrụ iji rụkọta ọrụ, nyocha ma melite arụmọrụ ha. Recognighọtaghị eziokwu ahụ bụ na, site na netwọkụ mmekọrịta, ị nwere ohere ịnweta ndị ọgbọ, ndị ọkachamara, ndị na-ere ahịa na ndị ọkachamara abụghị ihe ihere n'oge a. Ma ọ gwụla ma ị nwere ndị ọrụ nwere ịhapụ ekwentị ha n'ụgbọ ala ha, ha nwere ike ịnweta mgbasa ozi mmekọrịta. Ọ bụrụ na ha na-emegbu ya, azịza ya abụghị igbochi onye ọ bụla ohere… azịza ya bụ ka ọrụ were n'ọrụ.
Tags: microsoftarụpụtaghịelekọta mmadụ mediaịkparịta ụka n'socialntanetọmụmụ ebe ọrụ
Jun 9, 2013 na 11:30 AM
Douglas, nke a bụ nnukwu! Anọ m na-achọ posts na mgbasa ozi mgbasa ozi maka akwụkwọ 4 HR Blog kwa izu (ọkacha mmasị m n'izu) ma ga-agụnye nke a. Daalụ maka ịkekọrịta Ama ahụ.